Wararka - Go'aaminta afar nitroimidazoles iyo haraaga dheef-shiid kiimikaad ee cunnooyinka xoolaha laga soosaaray - dareere chromatography-tandem mass spectrometry
Nidaamka falanqaynta amniga cuntada
Thermo Sayniska Nolosha Sayniska MS kaliya kuma lahan dhaqan soo jireen ah oo tikniyoolajiyad ah, laakiin sidoo kale wuxuu sii wadaa wax cusub. Falanqaynta qiyaasta Quadrupole ee runta ah ee isku xidha runta ee ku habboon sheyga korantada aragti ahaaneed ee buug ayaa loo isticmaalaa dhammaan TSQ® saddex-jibbaaranayaasha tiro-koobabka. Tan iyo markii la bilaabay seddex meelood ee ugu yar adduunka ee loo yaqaan 'MS / MS (TSQ®) spectrometer-ka tirada badan sanadkii 1980, TSQ® seddex quadrupole mass spectrometer waxaa si weyn loogu isticmaalay ilaalinta deegaanka, beeraha, karantiilidda, badbaadada cuntada, iwm. Tijaabinta falanqaynta, oo si buuxda u awood u leh tijaabada joogtada ah Tijaabinta muunado mug badan oo dalagyo ah, xoolaha iyo wax soo saarka digaagga, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo cuntooyinka la warshadeeyay ee la xiriira, sida haraaga cayayaanka ee cuntada, haraaga dawooyinka xoolaha, mycotoxins, waxyaabaha lagu daro, Cuntada nafaqada leh iyo wasakhda dabiiciga ah iyo mashaariic kale oo kaa caawinaya inaad si fudud ula kulanto shuruudaha sharciyeynta ee sii kordhaya.
5-nitroimidazoles waa nooc ka mid ah daawooyinka leh qaab-dhismeedka giraanta 5-nitroimidazole, kuwaas oo leh waxqabadka anti-protozoal iyo antibacterial. Imtixaannada maalinlaha ah waxay ku lug leeyihiin shaybaarrada ka soo jeeda xoolaha sida xoolaha, wax soo saarka biyaha, waxyaabaha shinnida, iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Maqaalkani wuxuu tixraacayaa SN / T 1928-2007, GB / T 21318-2007, GB / T 22949-2008, GB / T 21995-2008, Wasaaradda Beeraha 1025 Ogeysiis-22-2008, Wasaaradda Beeraha No. 1486 Ogeysiis- 4-2010, SN / T 2579-2010, oo laga fududeeyay GB / T 23410-2009, GB / T 23407-2009, GB / T 23406-2009, waa hab qalab si dhakhso leh loogu ogaado hadhaaga daroogada nitroimidazole kala duwan, habka caadiga ah ee gudaha. Tirada.
Daryeelka ka hor
Qalabka reagent ee la xiriira, qaabeynta caadiga ah iyo keydka, iyo qaababka diyaarinta muunadda, fadlan tixraac heerarka kore. Hababka qalabka la xiriira, fadlan tixraac dukumiintigan. (TSQ Triple Quadrupole Mass Spectrometer Buugga Codsiga Buugga - Tijaabinta Badbaadada Cuntada)
Nidaamka TSQ Triple Quadrupole LC / MS waxaa lagu qalabeeyaa heer weji dareere cadaadis aad u sarreeya leh.
Xaaladda wajiga dareeraha
Xaaladda muuqaalka guud
Natiijada tijaabada ah
Chromatogram-ka caadiga ah (waxa laga soo qaatay lifaaqa GB / T 23410-2009)
Waxaa ka mid ah hababka lagu ogaanayo heerka qaran ee kor ku xusan, xaddiga ogaanshaha dawooyinka nitrofuran ee maaddooyinka kala duwan waa 1.0-5.0 μg / kg. Qaabku wuxuu si buuxda awood ugu leeyahay inuu buuxiyo shuruudaha heerarka sharciyeynta gudaha iyo kuwa caalamiga ee xasaasiga ah iyo dib-u-soo-saaridda hababka sharciyeynta caadiga ah.